Shiinaha Diltiazem CAS NO: 42399-41-7 warshad iyo soosaarayaasha | Guanlang
Diltiazem Dka soo baxa
Magaca Kiimikada: Diltiazem
CAS Maya.: 42399-41-7
Qaaciddada Molecular: C22H26N2O4S
Miisaanka Molecular: 414.51800
Qaabdhismeedka kiimikada ：
Muuqaal budo cad
Baaritaan 99% min
Cufnaanta 1.26 g / cm3
Bar kulaylka 594.4ºC ee 760 mmHg
Barta dhalaalida 212 °C
Bar dhibic 313.3ºC
Xaaladda keydinta Xir oo ku kaydi meel qalalan
Diltiazem Farmashiiste iyo sunta sunta ：
Wax soo saarkani waa xanibaade kaalshiyam kaalshiyam ah oo aan dihydropyridine ahayn. Saameynteeda waxay la xiriirtaa ka hortagga qulqulka kalsiyumka inta lagu jiro kala-soocidda myocardium iyo muruqyada jilicsan ee xididdada dhiigga.
2.Badeecadani waxay si wax ku ool ah u balaarin kartaa xididdada halbowlayaasha wadnaha iyo xididdada dhiigga, waxay yareyn kartaa angina isdaba-joogga ah ama angina ee ay sababto ergoxin ay keento xididdada xididdada dhiiggu; Waxay yareysaa baahida oksijiinta myocardial, waxay kordhisaa dulqaadka jimicsiga, waxayna yareysaa angina dadaalka iyadoo hoos u dhigeysa heerka garaaca wadnaha iyo yareynta cadaadiska dhiigga.
Badeecadani waxay dejisaa muruqyada jilicsan ee xididdada, waxay hoos u dhigtaa caabbinta xididdada dhiigga ah waxayna hoos u dhigtaa cadaadiska dhiigga. Baaxadda 'hypotension' waxay la xiriirtaa heerka dhiig-karka, cadaadiska dhiigga ee caadiga ahna wuxuu kaliya ka dhigayaa cadaadiska dhiigga in yar hoos u dhaca.
Badeecadani waxay leedahay saameyn aan fiicnayn oo dabiici ah waxayna hoos u dhigi kartaa marinka qanjirka 'sinoatrial node iyo atrioventricular node.
Shaygaani waa kaalshiyam kaalshiyam ah, kaas oo yareyn kara angina pectoris, yareyn kara cadaadiska dhiigga, wuxuu yeelan karaa saameyn aan fiicnayn, wuxuuna gaabin karaa marinka sinoatrial node iyo atrioventricular node.
Diltiazem waa nooc cusub oo kalsiyum ah, oo loo isticmaali karo daaweynta dysrhythmia supraventricular, angina pectoris iyo dhiig karka dadka da'da ah.
Waxaa loo adeegsaday daaweynta bukaanka dhiig karka.
Diidmada Diltiazem ：
1. Xasaasiyad ayuu u leeyahay Diltiazem ama kuwa kale ee kaalshiyamka kaaliyayaasha ah.
2. Cadaadis daran ama wadno-xanuun.
3.Xanuun myocardial daran oo leh saxmad sambabka ah.
4.Waxay kuxirantahay uurka
Diltiazem Diidmada xun:
Caadi: barar, madax xanuun, lallabbo, wareer, firiiric, daciifnimo
Baakadaha iyo rarka Diltiazem ：
Baakadaha: 1kg / Bacda Aluminium Aluminium, 25kg / durbaan
Amarka Tusaalaha Diltiazem
Hore: 99% Lidocaine Hydrochloride / Lidocaine HCl CAS 73-78-9
Xiga: Waxyeelada Boric Acid ee CAS 11113-50-1 iibinta kulul
Warshadda Shiinaha waxay siisaa aniga daahirnimada ugu sareysa aniga ...
Daalacanaya Products Shiinaha Miisaanka Tayada Sare ...